कम्युनिष्ट भित्रको क्षुद्र मानसिकता दासढुङ्गा सम्म चलिरहोस्- पामेल उपाध्याय – Halkhabar kura
५ माघ २०७७, सोमबार १६:१६
कम्युनिष्ट भित्रको क्षुद्र मानसिकता दासढुङ्गा सम्म चलिरहोस्- पामेल उपाध्याय
नेपाल मा राजनीतिक दल गठन गर्नु र त्यसले आकार लिदै गर्दा, भागवण्डामा होस् या पदिय मर्यादामा होस्। बिचारमा होस् वा अन्य कुनै कारणहरुले होस्। फुट्नु र जोडिनु कुनै नौलो, अनौठो, उदेक लाग्दो वा अचम्म को घटना केही पनि होइन। यहाँ धेरै राजनीतिक दलहरु फुट्दै र जोडिदै गरेका थुप्रै इतिहासहरु छन्। उदाहरण को लागी धेरै टाढा जानै पर्दैन। नेकपा (एमाले) फुटेर माले भएको थियो। माओवादी त ४/५ टुक्रै होलान्। नेपाली काङ्ग्रेस फुटेर अर्को काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भएको थियो। राप्रपा फुटेर २/३ टुक्रा भएको थियो। साझा बिवेकशिल पनि फुटेको थियो। तराई तिर को क्षेत्रीय पार्टीहरु कति पटक फुट्दै र जोडिदै गरेका छन्। यो बिषय लाई यहि थाती राखौं।
मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने- मेरो सबै राजनीतिक दलहरु सङ्ग राम्रो सम्बन्ध छ। सबै राजनीति दलका जिल्ला स्तरीय नेताहरु ले बोलाउनु पनि हुञ्छ। आउनुहोस् सङ्गै काम गरौं भनेर। तसर्थ कुनै दल प्रती पुर्वाग्रह नराखिकन भन्नू पर्दा, कम्निस देखि बाहेक का जति पनि राजनीतिक दलहरु बिभाजित भए तिनिहरुका शुभचिन्तक समर्थक वा कार्यकर्ताहरुमा, मनभित्र के होला राम जाने तर बाहिरी आवरणमा सिमा भन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्तिहरु दिएको सुनिएन। निकृष्ट उछृङ्खलताले हद पार गरेको देखिएन। एकअर्काप्रती आरोप प्रत्यारोप को लामो समय सम्म खासै वर्षा भएको सुनिएन। मानौँ एककिसिम को संयमता नै अपनाएको देखियो। अर्थात मानवीय आचरण र संस्कारमा कुनै अषर गरेको पाईएन। यस्को प्रत्यक्षदर्शी हामी सबैजना हौं।
तर कम्निस पार्टी को सवालमा भन्नू पर्दा- साचो र सत्य हो त्यसैले अलिक अपाच्य हुन सक्ला। यी माथिका नियमहरु (अपवाद लाई छोडेर) पटक्कै लागू नहुने रहेछ। यस्को उदाहरण एमाले फुट्दा होस् वा माओवादी फुट्दा होस्। वा अहिले देखिएको बर्तमान अवस्थामा होस्। एउटै पार्टीमा हुँदा सङ्गै हिडेको डुलेको काम गरेको साथी पार्टी फुटेर कित्ता फरक हुने बित्तिकै एक अर्का प्रती अराजक, बैमनष्य, रीस, इर्ष्या, गालीगलौज, अस्लिल, फोहोरी आदि जति पनि नकारात्मक शब्दहरु छन् तिनले सुसज्जित बनाईन्छ। कति सम्म भने सङ्गै हिडेको साथी छुट्ने बित्तिकै सामन्ती, शोषक, जासुस, भारतिय दलाल, साम्राज्यवाद को मतियार सबै भईसकेको हुञ्छ। कुन ग्रन्थी ले काम नगरेको हो ! भेउ पाईरहेको छुईन।
कम्निसहरुमा चाहिँ विभाजन सङ्गै किन यस्तो अस्लिलता ज्यादा हुञ्छ अर्थात गालिगलौज र सत्तोसराप किन चरम उत्कर्समा पुग्छ ! यस बारेमा आ-आफ्नो दृष्टिकोण र बिचार हुञ्छ। मेरो देखेको चाहिँ- कम्निसहरु अति नै अध्ययनशिल हुञ्छन्। जस्को कारण ब्रह्माण्ड कै व्याख्या गर्ने ल्याकत राख्छन्। लामा-लामा पट्यार लाग्दा भाषणहरु यसैको उदाहरण हो। तर, कम्निसहरु ले अध्ययन गर्ने पुस्तक भनेको अब को युग मा कहिल्यै समाधान ननिस्कने। जति नै ठेलिहरु पल्टाए पनि समाधान नभेटिने मार्क्स लेनिन माओ का दर्शन नै हो। त्यस भित्र के छ मैले अध्ययन गरेको छुइन। तर, आज को राजनीतिक वृत मा यी सबै सुपर फ्लव सिद्धान्त हुन्। कारण विश्व बाट कम्निसहरु लोप हुँदै जानू। अब को पुस्ता ले सायद जर्मन मा मार्क्स लाई चिन्दैनन् होला। रुस मा लेनिन को साम्यवाद समाप्त भयो। चिनमा माओ को बिचारधारा लाई कसैले अनुसरण गर्दैन। यिनिहरु को योगदान एउटा कालखण्डमा मा थियो अब समाप्त भैसक्यो। यिनिहरु ले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त स्कुल कलेजमा बैचारिक वहस को निम्ति उपयोगी बन्ला तर, राजनीतिक सिद्धान्त को निम्ति माथी नै भनियो सुपर फ्लप हो।
निचोडमा, त्यही समाप्त भएको राजनीतिक दर्शन लाई समाती हिड्नाले त्यसबाट निस्कने चेतना अथवा शिक्षा भनेकै अस्लिल गालिगलौज मात्र रहेछ। र यो पनि सत्य हो, कम्निसहरुमा नम्रता भद्र शालिनता भन्ने शब्दावली कम्तिनै पाईन्छ। हैन भनेर पत्याउने आधार पनि छैन। लु तलका शुभचिन्तक, समर्थक वा कार्यकर्ताहरुमा राजनीतिक र सामाजिक मुल्यमान्यतामा ह्रास आएर बिचलन को कारण निकृष्ट शब्दहरु प्रयोग हुन गयो रे। माथिल्लो तप्कामा पनि उहीँ हालत छ। आरोप प्रत्यारोप भैरहदा एक ले अर्को लाई खुईल्याउने प्रवृती चलिरहदा यो क्रम दासढुङ्गा हत्याकाण्ड सम्म पुगोस् भन्ने आशिर्वाद दिन चाहाञ्छु। नमस्कार।
Previous कान थापेर सुन्नुस् डाका, चोर, गधा, पाजी सब भनेको सहुँला ! तर नेता भनेको कीमार्थ सहने छैन ! (भिडियो)
Next राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइन शङ्करनाथ रिमाल भन्छन् – झण्डा वैदिक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक (यसरी बन्यो डिजाइन)